OTU ESI EJI WEBCAMMAX - ESI MEE - 2019
N'oge na-adịghị anya, ọbụnadị onye kasị nwee ndidi na-agwụ ike site na itinye paswọọdụ oge ọbụla ị banyere usoro sistemụ. Karịsịa na ọnọdụ ebe ị bụ naanị PC ọrụ ma ghara ịchekwa ozi dị mwute. N'isiokwu a, anyị ga-eso gị nwee ọtụtụ ụzọ ga-ewepu igodo nchekwa na Windows 10 ma kwado usoro nbanye.
Windows 10 paswọọdụ ụzọ mwepụ
Ị nwere ike iwepu paswọọdụ site na iji ngwaọrụ Windows, yana iji software dị iche iche. Kedu n'ime ụzọ ndị ị ga-esi họrọ bụ maka gị. Ha niile bụ ndị ọrụ ma nyere aka na-enweta otu ihe ahụ.
Nzọụkwụ 1: Nchịkọta pụrụ iche
Microsoft mepụtara software pụrụ iche a na-akpọ Autologon, nke ga-edezi ndekọ ahụ maka gị yana kwe ka ị banye na-abanyeghị paswọọdụ.
Usoro nke iji software a eme ihe bụ:
Gaa na akwukwọ ọrụ nke ọrụ ahụ ma pịa n'akụkụ aka nri nke akara "Download Autologon".
N'ihi ya, ihe ndekọ Archive ga-amalite. Na njedebe nke ọrụ, wepụ ọdịnaya ya na nchekwa dị iche. Site na ndabara, ọ ga-enwe faịlụ abụọ: ederede ma rụọ ọrụ.
Gbaa faịlụ ahụ a na-eme ihe site na ịpị ugboro abụọ na bọtịnụ òké aka ekpe. Ịkwanye ngwanrọ na nke a adịghị mkpa. O zuru ezu ịnakwere usoro eji. Iji mee nke a, pịa "Kwekọrịta" na windo nke meghere.
Mgbe ahụ, obere windo nwere ubi atọ ga-apụta. N'ọhịa "Aha njirimara" tinye aha njirimara zuru ezu, na na akara "Paswọdu" anyị ezipụta paswọọdụ na ya. Ubi "Ngalaba" nwere ike ịhapụ agbanwe agbanwe.
Ugbu a tinye mgbanwe niile. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ ahụ "Kwado" n'otu window. Ọ bụrụ na emezuru ihe niile n'ụzọ ziri ezi, ị ga-ahụ na ihuenyo ngosi maka nhazi nke faịlụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, windo abụọ ahụ ga-emechi ya ozugbo na ịkwesịrị ịmalitegharịa kọmputa ahụ. Ị gakwaghị abanye paswọọdụ akaụntụ gị site n'oge ruo n'oge. Iji weghachite ihe niile gaa na nke mbụ ya, gbakwunye ihe omume ahụ ma pịa bọtịnụ ahụ. "Gbanyụọ". Ozi na-egosi na ihuenyo na-ekwu na nhọrọ ahụ nwere nkwarụ.
Usoro a zuru oke. Ọ bụrụ na ịnweghị ike iji ngwanrọ ndị ọzọ, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike iji iji ngwaọrụ OS.
Usoro 2: Nchịkọta Akaụntụ
Usoro a kọwara n'okpuru ebe a bụ otu n'ime ihe kachasị ewu ewu n'ihi na ọ dị mfe. Iji jiri ya, ọ dị mkpa ka ị mee ihe ndị a:
Pịa bọtịnụ na keyboard n'otu oge "Windows" ma "R".
Igwe usoro mmemme ga-emeghe. Gbaa ọsọ. Ọ ga-agụnye naanị akara ọrụ ị chọrọ ịbanye na njedebe "netplwiz". Mgbe nke ahụ mechara pịa bọtịnụ ahụ "OK" n'otu window ahụ "Tinye" na keyboard.
N'ihi ya, window achọrọ ga-apụta na ihuenyo. N'elu ya, chọta akara "Chọrọ aha njirimara na paswọọdụ". Wepu igbe dị n'aka ekpe nke akara a. Mgbe pịa nke a "OK" na ala nke otu windo.
Igbe ọzọ na-emepe. N'ọhịa "Onye ọrụ" Tinye aha njirimara zuru ezu. Ọ bụrụ na ị na-eji profaịlụ Microsoft, mgbe ahụ ịkwesịrị ịbanye nbanye niile (dịka ọmụmaatụ, [email protected]). Na mpaghara ala abụọ, ị ghaghị itinye paswọọdụ dị irè. Duplicate ya ma pịa bọtịnụ. "OK".
Pịa bọtịnụ ahụ "OK", ị ga-ahụ na windo niile na-emechi emechi. Atụla egwu. Ọ ghaghị ịbụ otú ahụ. Ọ na-anọgide na ịmalitegharịa kọmputa ma chọpụta ihe ọ rụpụtara. Ọ bụrụ na emere ihe niile n'ụzọ ziri ezi, mgbe ahụ, nzọụkwụ ịbanye paswọọdụ ga-anọghị, ị ga-abanyekwa na ya ozugbo.
Ọ bụrụ na ị chọrọ maka ihe ụfọdụ ị ga-eji weghachite usoro ntinye ederede, tinyezie ebe ọzọ ị ga-ewepụ ya. Usoro a zuru oke. Ugbu a ka anyị lelee nhọrọ ndị ọzọ.
Usoro 3: Dezie aha
E jiri ya tụnyere ụzọ gara aga, nke a bụ ihe mgbagwoju anya. Ị ga-edezi faịlụ faịlụ na ndekọ ahụ, nke na-akpata nsogbu na-ezighi ezi ma ọ bụrụ na ọ bụ omume ọjọọ. Ya mere, anyị na-atụsi anya ike ịgbaso ntụziaka niile dị n'elu ka anyị ghara inwe nsogbu ọzọ. Ị ga - achọ ihe ndị a:
Anyị na-agbanye na keyboard n'otu oge igodo "Windows" ma "R".
Igwe mmemme ga-apụta na ihuenyo. Gbaa ọsọ. Tinye oke n'ime ya "regedit" ma pịgharịa bọtịnụ ahụ "OK" dị n'okpuru.
Mgbe nke ahụ gasịrị, windo ga-emeghe na faịlụ ndekọ. N'akụkụ aka ekpe ị ga-ahụ osisi ndekọ. Ịkwesịrị imeghe nchekwa na usoro ndị a:
Mepee folda ikpeazụ "Winlogon", ị ga-ahụ ndepụta nke faịlụ na n'akụkụ aka nri nke windo ahụ. Chọta n'etiti ha akwụkwọ a kpọrọ "DefaultUserName" ma mepee ya site na ịpị bọtịnụ aka ekpe. N'ọhịa "Uru" A ghaghị ịkọwa aha akaụntụ gị. Ọ bụrụ na ị na-eji profaịlụ Microsoft, a ga-edepụta ozi gị ebe a. Lelee ma ihe niile dị mma, wee pịa bọtịnụ ahụ "OK" ma mechie akwụkwọ.
Ugbu a ịchọrọ ịchọ faịlụ a na-akpọ "DefaultPassword". O yikarịrị, ọ ga-anọghị. N'okwu a, pịa ebe ọ bụla n'akụkụ aka nri nke window RMB ma họrọ akara "Mepụta". Na submenu, pịa na akara "Ntọala ntụgharị". Ọ bụrụ na ị nwere nsụgharị Bekee nke OS, mgbe ahụ, a ga-akpọ usoro ndị ahụ "Ọhụrụ" ma "Njikọ Ntuchi".
Aha faịlụ ọhụrụ "DefaultPassword". Ugbu a, mepee otu akwụkwọ ahụ na akara "Uru" tinye akaụntụ paswọọdụ gị dị ugbu a. Mgbe pịa nke a "OK" iji kwado mgbanwe ndị a.
Nzọụkwụ ikpeazụ ka dị. Chọta faịlụ na ndepụta "AutoAdminLogon". Mepee ma gbanwee uru ya na "0" na "1". Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị na-echekwa ndetu site na ịpị bọtịnụ ahụ. "OK".
Ugbu a, mechie edetu ndekọ na reboot kọmputa. Ọ bụrụ na i mere ihe niile dịka ntuziaka ndị ahụ si dị, ị gakwaghị achọ ịbanye paswọọdụ.
Usoro 4: Ụkpụrụ OS nke osote
Usoro a bụ ngwọta kachasị mfe mgbe ịkwesịrị iwepu igodo nchekwa. Mana naanị ya bụ na ọ na-arụ ọrụ nanị maka akụkọ mpaghara. Ọ bụrụ na ị na-eji akaụntụ Microsoft, ọ ka mma iji otu n'ime ụzọ ndị e depụtara n'elu. A na-eme usoro a n'ụzọ dị mfe.
Mepee menu "Malite". Iji mee nke a, pịa na akuku aka ekpe nke desktọọpụ na bọtịnụ ahụ na mbiet Microsoft logo.
Ọzọ, pịa bọtịnụ "Nhọrọ" na menu nke meghere.
Ugbu a gawa ngalaba "Akaụntụ". Pịa ozugbo na bọtịnụ òké aka ekpe aha ya.
N'akụkụ aka ekpe nke window ahụ meghere, chọta akara "Nhọrọ Nbanye" ma pịa ya. Mgbe nke ahụ gasịrị, chọta ihe ahụ "Gbanwee" na ngọngọ na aha ahụ "Paswọdu". Pịa ya.
Na window ọzọ, tinye paswọọdụ gị ugbu a wee pịa "Na-esote".
Mgbe windo ohuru na-egosi, hapụ ebe niile ka efu. Naanị nkwado "Na-esote".
Nke ahụ niile. Ọ na-anọgide na-pịa ikpeazụ "Emere" na windo ikpeazụ.
Ugbu a, paswọọdụ na-efu ma ịkwesighi ịbanye ya oge ọ bụla ị banyere.
Isiokwu a abatala nkwubi okwu ya. Anyị gwara gị banyere usoro niile ga-eme ka ị gbanyụọ ọrụ ntinye na paswọọdụ. Dee ihe ndị a ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara isiokwu a kọwara. Anyị ga-enwe obi ụtọ inye aka. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye igodo nchekwa n'ọdịnihu, anyị na-akwado gị ka ị mara onwe gị na isiokwu pụrụ iche nke anyị kọwapụtara ọtụtụ ụzọ iji nweta ihe mgbaru ọsọ ahụ.
More: Paswọdu gbanwere na Windows 10